मंगोल राष्ट्र बनाउने सपना देखेको MNO बुद्धलालले बुद्ध धर्मलाई राजनीतिमा तानिरहेको देखेको छ - MONGOL KHABAR
मंगोल राष्ट्र बनाउने सपना देखेको MNO बुद्धलालले बुद्ध धर्मलाई राजनीतिमा तानिरहेको देखेको छ
ताजेन्द्र मगर :- MNO का बुद्धलाल समुहका नेता देखि कार्यकर्ता सम्म,मामुली सदस्य देखि केन्द्र सम्मका मंगोल योद्धाहरुको भनाइ 👉️ संसारले बुद्ध धर्म हो भन्दै र मान्दै आइरहदा बुद्ध धर्म होइन दर्शन हो । बुद्ध एक मंगोलका पुत्र हुन, बुद्ध आफैमा निरन्कारी पनि थिए । उनको उपदेश हामी सबैले मान्नु पर्छ । उनको ज्ञान, दर्शन सबैमा बाड्नु पर्छ भन्दै गर्दा यिनिहरुको जो सामाजिक संजाल तिर स्टाटस कमेन्टहरुको चर्तीकला र एउटा मंगोल राष्ट्र बनाउने सपना देखेको MNO बुद्धलालले बुद्धलाई राजनीतिमा तानिरहेको देखिरहेका छौ । धर्म निरपेक्षको ओकलत गर्ने हामी मंगोल जनताहरुले ! बिजोग छ यिनका मंगोल जनताहरु प्रतिको आक्रोश, आवेश, धम्की, बोल्ने शैली, यसो सुन्दा र पढ्दा लाग्छ के साच्चिकै बुद्धको उपदेश, दर्शनमा यहि सिकाएको छ ? के ८०% अहिन्दु मंगोल जनताहरुलाई एकताको बिन्दुमा लैजादै छन ? कि आफ्नो घमण्ड, दम्भ, पावर देखाउदै एकलौटी निरंकुश तानाशाही शासन लाद्दैछन ? यिनिहरुको भनाई बुद्ध लाई मान्नेहरु मात्रै मंगोल रे बाकी दुश्मन रे ? थुक्क तिम्रा मंगोल प्रतिको मंगोलको नाम जप्दै आफ्नै दुनो सजाउने तिम्रा स्वार्थको राजनीति हामीले नजिकै बाट नियाली रहेका छौ ।
ताजेन्द्र मगरको फेसबुक पोष्ट
Tejindra pun MonGol ले यसरी कमेन्ट गर्छ । :- हरेक मान्छेको बिचार एउटै हुन्छ भन्ने छैन सर बिचार फरक फरक हुन्छ । जसलाई पनि आफ्नो बिचार सहि र अर्काको गलत लाग्नु स्वोभाबिक नै हो । तर सहि के हो गलत के हो भन्ने कुरा एक न एक चोटि पर्दाफास भै नै हाल्छ । मलाई जहाँ सम्म लाग्छ हामी सबै निस्वार्थ भाबनाले डा.गोपाल गुरुङको अधुरो सपनालाई पुरा गर्ने यात्रामा हिडिरहेका छौ । यो देशमा मंगोल राष्ट्रबाद लागु गर्दै मुलवासीहरुको हातमा शासन सत्ता ल्याउनको निम्ती संघर्ष गरिरहेका छौ । कुनै बिसयमा फरक मत आउँदा बित्तिकै त्यसैको विषयलाई लिएर आपसमा झगडा गरेर ब्यक्तिगत चरित्र माथी नै आच आउने गरि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाउदै झन एकता हुनुको सातो हामी हामिमै बिभाजित हुदै गयौ भने, हामी कहिले सफल हुदैनौ । सकारात्मक छलफल र बहस गरि समस्याको समाधान हुनु जरुरी छ । नत्र तपाई हामी सबै जति उफ्रे पनि केहि हुने वाला छैन । तपाई हामी सबैले आफ्नै कुरा ठुलो आफैले भनेको हुनु पर्छ भन्न थालियो भने समस्या त्यहिको त्यही हुन्छ । त्यसैले आपसमा छलफल र बहस गरि समस्याको समाधान गरौ । मत भन्छु हामी एकता हुनुको अर्को विकल्प छैन ।
ताजेन्द्र मगरले यसरी रिप्लाई दिनु हुन्छ -: Tejindra Pun MonGol सर तपाईंको कमेन्ट आउदा जवाफ दिने मेरो पनि फर्ज बन्छ । मैले तपाईं लाई प्रश्न गरे सर अन्यथा नलिनु होला । तपाईंलाई के लाग्छ सर,आजको परिवेशमा र यो परिस्थिति अनि डाक्टर गोपाल गुरुङ ज्युले मंगोललाई बिउझाइ दिनु भएकोमा हामीलाई चिन्ता छैन । हाम्रो अस्तित्वको लागि ? हामीले यस्तो के नै र कसको बिरोध गरेका छौ ? जस्तो लाग्छ तपाईंहरु लाई ? केन्द्रको दम्भ बास्तबमा तानाशाही हो कि होइन कस्तो लाग्छ तपाईंको बुझाइमा ? के MNO को कार्यक्रममा बिना बुद्धको फोटो राखेर मंगोल एकता हुन सक्दैनन ? बुद्धको फोटो राख्नको कारण MNO को बुझाइ अनुसार बुद्ध अपहेलित भए रे संसारले चिन्यो रे हामी मंगोल भएर पनि मंगोल बुद्धलाई चिनेनौ रे अब तपाईं भन्नुस MNO ले बुद्धको अस्तित्वको लागि राजनीति गरेको हो कि ८०% मंगोल जनताको अस्तित्वको लागि ? ८०% मा कुन कुन धर्म मान्ने मंगोल जनताहरु पर्दछन ? धर्म निरपेक्ष, लोकतन्त्र, मानवअधिकार भनेको के हो ? कि त MNO ले धर्म निरपेक्ष मान्दैनौं भन्नू पर्यो ? मानौ बुद्ध मंगोल हुन बुद्ध साच्चिकै अपहेलित परेकै हुन भने हामी मंगोल जनताहरु एकता हुँदै जाने क्रममा किन अहिले बुद्धलाई लिएर विवादित बिषय बनाउनु परेको थियो ? यो काम त हामी मंगोल जनताहरुलाई एकता बनाएर चुनावी पद्धतिबाट बहुमतको साथमा नेपाल मंगोलको हातमा लिएर नेपालको राज्य सत्ता कब्जा गरि सके पछि पनि त बुद्धलाई न्याय होस अथवा अपहेलितबाट माया गर्न सकिन्थ्यो किन यति चाडो.....? यहाँ त काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकि ठिमीतिर भएको छ । धन्यवाद सर मलाई पनि आउँछ लेख्न र बोल्न तर धेरै लेखियो भने चिनी धेरै खायो भने चिनी पनि गुलियो हुन्छ जस्तै...फेरि .
Tejindra pun MonGol ले यसरी कमेन्टको रिप्लाई दिनु हुन्छ :- ताजेन्द्र मगर सर बिस्तृत रुपमा बहस र छलफल गर्ने हो भने सायद यो कमेन्टमा उचित नहोला कि जस्तो लाग्छ । हुनत म भन्दा धेरै जान्ने बुझ्ने तपाई हुनुहुन्छ । म तपाई भन्दा जान्ने हुन खोजेको चाही पक्कै होइन । केन्द्रीय लेबलका नेताहरुले गरेको निर्णय हामीलाई भन्दा कयौ कुराहरु उहाँहरुलाई थाहा छ । के सोचेर गर्नु भाको छ । मलाई लाग्छ पक्कै पनि mno कै भलाइका लागी गर्नु भाको होला । मेरो निश्कर्ष के हो भने यदि विवाद नै भएर एक आपसमा एक हुनु को सातो फुत हुदै जान्छ भने किन राख्ने नराखे नि केहि फरक पर्दैन भन्ने हो ।
ताजेन्द्र मगरले यसरी दिनुहुन्छ रिप्लाई :- Tejindra Pun MonGol सर मैले माथी नै भनिसकेको छु ल मेरो भन्नाको मतलब तपाईंले कसरी बुझ्नु भएको छ ? यहाँ जान्ने र नजान्नेको कुरा होइन तपाईं पनि जान्ने त पक्कै हुनुहुन्छ, होइन भने तपाईंको कमेन्ट ले बताइरहेको छ कि घडिको सुइ कता मोडिएको छ भन्ने कुरा । यस्तो कस्तो आन्तरिक कुरा हो सर यस्तो कस्तो त्यो भलाई हो सर कि केन्द्र नेताले जिल्ला नेतालाई जिल्ला नेताले आफ्नो कार्यकर्तालाई कार्यकर्ताले जनतालाई बुझाउन नसक्नु ? यदि बुझाउन सकेको भए यो परिस्थिति आउन सक्थेन किन आयो ? यो जिम्मेवारी कसको ? के तपाईं हामी सबै मंगोल एकता भएर जाउ भन्ने को ? गर्ने नै हो भने सत्य तथ्य यो कमेन्टमा मात्रै होइन जुनसुकै ठाउँमा बहस गरौ न । किन लुकाछुपी यसो गर्नाले के जनतालाई अझै पनि अन्धकार मै राख्ने ? डाक्टर गोपाल गुरुङ ज्यु ले के भन्नू भएको छ MNO लाई ? यो सत्यतथ्यको राजनीति पार्टी हो न कि कुनै छलकपटको । मैले यसो भनी रहदा बुझ्नुस दालमे कुछ काला है ।